ProOpinion: Midira vondrom-piarahamonina atosiky ny fikarohana | Martech Zone
Asabotsy, Aprily 25, 2015 Alahady 26 aprily 2015 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo fanovana hitantsika tamin'ny alàlan'ny tranonkala dia ireo tranonkala torohevitra maimaimpoana sy freemium izay manohy miady amin'ny kalitaon'ny atiny sy ny fahamarinan'ny fampahalalana vokariny. Raha ny fanapahan-kevitra momba ny varotra no resahina dia manohy mahita izahay fa ny fomba fanao voatondro dia mamokatra vokatra tsara indrindra. Zava-dehibe ho an'ny consultants na mpivarotra ny fandinihana ny kolotsaina, ny loharano ary ny tanjon'ny orinasa alohan'ny hanaovana tolo-kevitra momba ny paikady na ny sehatra. Ny habe iray dia tsy mifanaraka amin'ny rehetra.
ProOpinion dia manome atiny manam-pahaizana manokana momba ny fikarohana, tsy misy any an-kafa satria ny ProOpinion no loharanon'ny fikarohana. Be dia be ny votoatiny, mora azo ary manan-danja indrindra.
Ireo mpikambana ao amin'ny ProOpinion dia natokana ho an'ny fandrosoana, manolo-tena tanteraka amin'ny fanavaozana zava-baovao, ary maharitra amin'ny fikatsahana tontolon'ny asa tsara kokoa. Ho an'ireo orinasa manerana an'izao tontolo izao, ny valiny mivantana avy amin'ireo olona mampiasa ny vokatra sy serivisin'izy ireo dia tena ilaina rehefa manandrana mitazona ny mpifaninana amin'ny fitaratra fijerin'izy ireo. ProOpinion dia mamela ny mpikambana hitaona ny vokatra sy serivisy ho avy amin'ny fizarana hevitra amin'ny fanadihadiana an-tserasera.
Malalaka ny fidirana ProOpinion saingy afaka mahazo zavatra kely ny mpikambana raha sady manatsara ny toeran'ny tsena ihany koa. Ny valisoa malaza sasany azo dia misy ny Amazon.com Gift Cards sy ny iTunes Gift Cards. Azonao atao koa ny manome ny vola azonao amin'ny Vokovoko Mena Amerikanina. Ny fanasana fanadihadiana dia alefa any amin'ny mailaka amin'ny mpikambana na afaka miditra amin'ny kaontiny ao amin'ny proopinion.com izy ireo handray anjara amin'ny fanadihadiana an-tserasera.
Mijanona eto ny fikarohana nataonao izay manan-danja aminao - midira ProOpinion amin'izao fotoana izao.
Ity dia resadresaka tohana nosoratako ho an'ny ProOpinion.
Tags: vondron'orinasafikarohana orinasafanoloran-kevitravondrom-pikarohana